Kooxda shirkadda | Shirkadda Zhongrong Technology Co., Ltd.
Mrs. Dai Shumei:Wakiilka Sharciga, Agaasimaha Guud, Injineer Sare, EMBA Master degree oo ka socda Jaamacadda Tsinghua, Bachelor degree oo ka socota Jaamacadda Zhejiang. Xubin sare oo ka tirsan Ururka Haweenka Haweenka ee Shiinaha, wafdiga NPC. Khabiir ka socda Hebei Bureau Science Science guulaha sayniska garsoore bank khabiir. Lahaanshaha 11 shati idman iyo 6 guulihii cilmiyadeed ee gobolka. Khabiirkii ugu horreeyay ee 6 ruqsad u oggolaaday acetic acid sameynta tikniyoolajiyadda ethanol. La helay 20 qaran, abaalmarin gobal.
James Fang:Muwaadin Mareykan ah oo hogaaminaya qaybta shidaalka bayoolojiga, shahaadada dhakhtarka ee Jaamacadda Cincinnati, dhakhtarka kadib ee US Risk Manage Research Lab of Bureau Qaranka ee Ilaalinta Deegaanka. Shirkaddayada sayniska madaxa iyo injineernimada farsamada guud. Ku guuleystaha 2008 "Guusha Sayniska" ee laga helo Xafiiska Ilaalinta Deegaanka Mareykanka. Injineerka guud ee mas'uulka ka ah howlgalka tijaabinta warshad ee qalab soosaarka raad-raaca fiber ethanol oo leh $ 66 milyan oo wadarta maalgashiga iyo naqshadeynta injineernimada & horumarinta farsamada ee 90,000 tan oo fiber-ka ethanol-soo-saarka sanadlaha ah oo ka badan $ 200 milyan. Khibrad iyo si guul leh u horseeda dhul-jabinta R & D oo ay ku jiraan ballaadhinta horumarka wax soo saarka ganacsiga, naqshadaynta warshadaha, dhismaha injineernimada, soo saarista qalabka iyo hawlgalka warshad.
Marwo Li Qiuyuan:Xoghayaha Guddiga Agaasinka, Agaasimaha R&D, Master degree of Biochemical oo ka socda Jaamacadda Zhejiang, injineer sare. Kahor intaanay qaadan farsamo yaqaan, maareeyaha warshada dawada ee Tangshan, maareeye kuxigeenka soosaarka ee wadajirka teknoloji biology injineernimada ltd.
Mr. Yang Chunhui:kuxigeenka GM, maareeyaha wax soosaarka, shahaadada koowaad ee kiimikada ee jaamacada Tianjin, injineer sare. Kahor intaanay qaadan farsamayaqaanka Tangshan Farmashiyoolajiyada hoosaadka dawada, mas'uul ka ahaado farsamada gacanta ee daawada.
Mr. Dai Shuzhong:Guddiga Agaasinka, kahor intaanay la wareegin maareeyaha iibka Hebei solvent ltd. Maamulaha warshada ee Tangshan Meiyuan Wine warshad. Maamulaha iibka ee shirkadda Tangshan nafta dab-dabka ltd.
Marwo Yang Xiaoqing:Kaaliyaha GM, Masterka maalgashiga maaliyadeed ee weyn ee Jaamacadda Exeter, MBA oo ka socda Jaamacadda OKC. Kahor intaan la qaadan agaasimaha guud, cilmi baare sare ee Gold Mind Investment Consultancy ltd.
Mr. Wang Tianshuang:General Engineer, shahaadada koowaad, injineer sare. Kahor intaanay qaadan farsamo yaqaan, maamule kuxigeenka warshada Hebei Fengrun Bacriminta, Maareeyaha Warshada ee Lida Coal Plant, maareeyaha farsamada ee Hebei Xuyang Chemical Group, injineerka guud ee Hebei solvent ltd.
Mr. Wu Chaoyong: Shahaadada dhaqtarka ee Sayniska Sayniska Shiinaha, agaasimaha xarunta R & D, qaabka hal-abuurnimada ee shirkadda sayniska Hebei
Marwo Hu Caijing:bachelor ee kiimikada ganaaxa weyn ka Zhengzhou Light Industry College, injineer sare. Lahaanshaha khibrad 20 sano ah oo wax iibsi iyo iib ah.
Tababarka Shaqaalaha: Dhaqanka iyo Wadahadalka Shirkada Zhongrong
Dhammaan tababarka shaqaalaha
Dhammaan imtixaannada shaqaalaha, ayaa looga baahan yahay in ka badan 90 dhibcood dhammaan cinwaanka shaqada
2019 Teknolojiyada Zhongrong 32km Baaskiil
2019 Shirka Ciyaaraha Jiilaalka ee Zhongrong